Toriteny Alahady 29 Marsa 2009 : Simona Petera, niverina ao amin'i Jesoa Kristy na dia efa nandà aza – FJKM Ambavahadimitafo Toriteny Alahady 29 Marsa 2009 : Simona Petera, niverina ao amin'i Jesoa Kristy na dia efa nandà aza |
Toriteny Alahady 29 Marsa 2009 : Simona Petera, niverina ao amin'i Jesoa Kristy na dia efa nandà aza
Publié le 29 mars 2009 à 12:03
Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno antsika amin’ny fahalalàna tsara an’i Kristy Jesoa.
Mbola ao anatin’ny vanim-potoan’ny Karemy isika. Tsy ny fihosorana lavenona, na fitafiana lamba fisaonana, na fifadian-kanina izay fombafomba ivelany ny karemy, fa ny fanekena hiaritra, fetezana hijoro na inona na inona zava-manjo.
Ny angalantsika fampianarana sy fampaherezana dia ny nandavan’i Petera an’i Jesoa in-telo araka izay voaoratra ao amin’ny Marka 14:66-72.
« Dia nigogogogo nitomany i Petera »
Amin’ny dikan-teny hafa dia hoe : « nisaro-tava i Petera ka nitomany »
Toa mahagaga ihany raha ilay vatolampy (mafy) nanorenan’i Jesoa ny Fiangonana no mitomany. Ranomaso tsy midika ho fahalemena na faharesana anefa io.
Ndeha aloha ho fantarintsika no tena anarany :
– Simona no tena anarany; mpanarato izy ary teo amoron’ny farihin’i Galilea no niantsoan’i Jesoa azy; nantsoina ho mpianatra, ho mpanara-dia, ho Apostoly.
– Simona no loha laharana amin’ireo mpianatra fa sady mahery fo no mafana fo ary nofidian’i Jesoa hiaraka aminy amin’ny fotoan-tsarotra na zava-tsarotra.
– I Jesoa no nanova ny anarany ho Petera, araka ny Matio 16:15-18
Marka 14:27-30 : « Handao Ahy avokoa ianareo rehetra […] Novalian’i Petera : na dia handao Anao avokoa aza ny olona rehetra, izaho kosa tsy mba handao Anao. Lazaiko marina aminao fa anio dia anio ihany raha mbola tsy maneno indroa akory ny akoho dia handà Ahy in-telo ianao«
Nentin’i Jesoa tao Getsemane i Petera, Johany ary Jakoba ka nomeny toro-marika : « Mijanona eto ianareo ary miareta tory ». Niverina i Jesoa fa natory izy telo mirahalahy.
« Matory ve ianao, ry Simôna? Tsy mahari-tory adiny iray? »
Dia lasa indray Jesoa ka raha niverina dia nahita azy natory indray.
Tsy afaka hiari-tory, tsy manan-kery hanarahana ny tenin’i Jesoa.
« Marisika ihany ny fanahin’ny olona fa ny nofo no malemy »
Toy izao no nandavan’i Petera in-telo araka izay nambaran’i Jesoa :
1) « Ianao koa niaraka tamin’i Jesoa avy any Nazareta »
Tsy fantatro sady ts azoko izay lazainao.
Nisy akoho naneno
2) « Anisan’ireny koa io rangahy io »
Fa mbola nandà indray i Petera
3) « Tena anisan’ireny tokoa ianao sady Galileana »
Fa niozona sy nianiana i Petera ka nanao hoe : Tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany
Niaraka tamin’izay dia nisy akoho naneno in-droa
Nitomany i Simona Petera, vonton’alahelo satria tsy nahatana ny teny nomena : « Tsy handao Anao aho »
Ranomasom-pivalozana ny an’i Petera. Tsy tanteraka ilay fanomezana toky nomena an’i Jesoa.
Niharihary taminy teo ny maha Andriamanitra an’i Kristy, mahalala ny olony, mahalala ny ho avy. Nahafantatra mialoha amin’ny maha mpaminany Azy ny hataon’i Petera.
Fa izay niseho teo amin’io andro io dia mampahafantatra antsika ilay Jesoa Kristy inoantsika. Mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra. Mandinika antsika Andriamanitra, mahalala ny herin’ny olona Izy ary mahalala koa ny fahalemeny.
Teo ny fanekem-pinoan’i Petera : « Ianao no Ilay Mesia, ny Zanak’Ilay Andriamanitra velona »
Teo ny fanomezan-tokin’i Simona : « Izaho tsy mba handao Anao »
Dia efa fantatr’i Jesoa Kristy fa tsy hahatàna izany i Simona Petera : « Handà Ahy in-telo ianao », ary dia nandà in-telo araka ny fotoana voalaza tokoa i Simona.
Tsy mbola natanjaka ny finoan’i Petera, natahotra ka dia niozona sy nianiana fa tsy mahalala ny Tompo.
Amin’izao Karemy na fandinihan-tena izao, Simona Petera ny olona; ka Simona ve aho, Simona ve ianao, Simona ve isika ka tsy hahajoro amin’ny maha mpanara-dia an’i Jesoa?
Sa Petera ka tsy hivadika fa hiaina amin’ny fahasoavan’Andriamanitra, satria ny Tompo dia mahafantatra ny momba ny olony (Salamo 139)
Tsy nifarana teo amin’io fandavana in-telo io akory ry havana ny momba an’i Petera. Nitomany izy, menatra ny tenany, menatra an’i Jesoa Kristy ary niova, nataon’ny Tompo ho fiasam-pamonjena.
Fa ho setrin’io fandavana in-telo io dia nanaiky in-telo indray i Petera.
Raha niseho tamin’ny mpianatra teo amoron’ny ranomasin’i Galilia i Jesoa tao aorian’ny nitsanganany tamin’ny maty dia nanankinan’i Jesoa andraikitra.
« Ry Simona zanakalahin’i Johany, moa tia Ahy ve ianao?
– Fantatrao fa tiako Ianao
– Ianao mahalala ny zavatra rehetra ka fantatrao fa tiako Ianao
Fahano ireo zanak’ondriko, aoka ianao ho mpiandry ireo ondriko.
Simona Petera, niverina ao amin’i Jesoa Kristy na dia efa nandà aza, dia nanokan-tena hitory ho an’i Jentilisa (tsy mpino) [ Tamin’ny Pentekosta, 3000 isa ny olona natao batisa].
Taratasy faharoa nosoratany dia mampiseho ny fitondrantena mendrika ny Kristiana, ary ny niafarany dia maty maritiora.
Ka na dia fahafatesana aza tsy nahasaraka azy tamin’ny ftiavan’i Kristy.
Koa anio ary, fiangonana miasa, nandà, niodina, miverena fa Kristy efa nitondra ny fahadisoana. Meteza indray hanolo-tena ho tia an’i Kristy; meteza hanavao ny fanekena an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy. Meteza ho olona vita fihavanana, fa ny fihavanana aminy no ahazoana aina, ny fanarahana azy no ahazoana aina.
Ny fiarahana amin’i Jesoa Kristy no ahazoantsika antoka ny FIAROVANA sy ny FIADANANA.
« Atolory an’Andriamanitra ny tenanareo toy ny olona efa maty no velona indray ary atolory an’Andriamanitra ireo zavatra anisan’ny tenanareo mba ho fiasana no entiny hanao ny marina »